U-Escobar Fold 1, ukugoqwa komfowabo wenkosi yezidakamizwa uPablo Escobar | Izindaba zamagajethi
Qaphela ukuthi asidlali ngale divayisi esanda kwethulwa izungezwe amantombazane ngezingubo zangaphansi ngesitayela se-narco esimsulwa. Idivayisi egoqekayo enesistimu yokusebenza ye-Android futhi eyakhelwe ngumfowabo womshushumbisi wezidakamizwa owaziwayo uPablo Escobar, isivele yethulwe ngokusemthethweni futhi izofika njenge uhlelo olukhawulelwe lwamafoni ayi-100.000.
Ngakho-ke ekuqaleni singacabanga ukuthi konke lokhu kuyihlaya nokuthi bayasihlekisa ngedivayisi eyenziwe nguRoberto Escobar, kodwa akuyona ihlaya nakancane futhi sesivele sithuthukisa ukuthi i-Escobar Fold 1 inayo umkhono wokuvikela wokuzama ukuskena Amaza we-RFID.
Kepha siya ezingxenyeni njengoba imininingwane engaka ngokuzumayo kusuka kule smartphone ingaba nzima. Idivayisi entsha inentuthuko yayo futhi inkampani ephethe yona ibingabizwa ngenye indlela: I-Escobar Inc. Yikho kanye lokhu okwenza yonke into ithathe umoya phakathi kwehlaya nokungathí sina futhi yiyo kanye le divayisi eligoqwayo Kuziwa ukumelana ne-Samsung uqobo ne-Apple uqobo, ngokusho kwenkampani uqobo kwiwebhusayithi yayo. Ukukhangisa ku-YouTube kuklanyelwe ukuheha ukunakwa okuphezulu futhi kuyacaca ukuthi abakunakanga lutho:
1 Idizayini eyenzelwe ukuheha ukunakwa
2 Kuvikelwe ukuskena imvamisa ye-RFID
3 Ukucaciswa okuyinhloko kwe-Escobar Fold 1
Idizayini eyenzelwe ukuheha ukunakwa
Akungabazeki ukuthi lo mklamo ubheke ukuheha ukunaka - kokuhle nokubi - ngakho-ke igolide nokumnyama kuhlangana ngokuphelele nama-initials wedivayisi uqobo futhi uphawu lomkhiqizo luvela ngakolunye uhlangothi lwalesi sibaya. Okuhle ukuthi isikrini siyi-7.8-intshi AMOLED enesinqumo se-FHD + futhi sinokulinganiswa okungu-4: 3 uma sinedivayisi evulekile. Idizayini yayo iyathakazelisa uma ivuliwe, kepha uma ivaliwe ...
Vula singasho ukuthi inephasi ngosayizi wesikrini futhi akukubi, kepha ayangezi noma yisiphi isikrini ngaphandle lapho lokhu kuvaliwe futhi uma sikulezo zikhundla sibona ukuthi siwugqinsi ngempela, ukwakheka kwabo abakushiyile lapho kusongelwe khona kubonakala kuyihlaya.
Iqiniso ukuthi asicaciswanga ngezinto zokwakha abenze ngazo le divayisi, esinakho kucace bha ukuthi intengo yayo yehliswe yaba phezulu kakhulu ngakho-ke kucishe kuqiniseke ukuthi lokhu yenziwe ngepulasitiki ngaphandle.
Kuvikelwe ukuskena imvamisa ye-RFID
Manje kuza ingxenye ethakazelisa kakhulu kulokhu kusongwa lapho ifemu uqobo ichaza khona ukuthi I-Escobar Fold 1 ukusonga okuphephe kakhulu emakethe. Ngokwalokho abanakho kuwebhusayithi uqobo, lesi siginali sinengqimba yensimbi ezacile evimba ngokuphelele i-RFID nokunye ukuxhumana okuzama ukungena kule divayisi, ngakho-ke kukhombisa isifuba esingavulelekile kohulumeni beplanethi.
Ukuphepha abaziqhayisa ngakho kwenza kube nzima kakhulu ukuskena i-terminal befuna ukuxhumana ngakho-ke inkampani iqinisekisa ukuthi yize kuyiqiniso akuphephile ngo-100%, yebo iphephe kakhulu kunamadivayisi abanayo ku-Samsung noma ku-Apple. Lokhu bakuchaza kuwebhu ...
Kwezinye izitatimende ezinemidiya ekhethekile okufanayo URoberto Escobar uthathe ithuba lokukhipha isifuba kule divayisi futhi bathi bafuna ngisho nokubulala i-Apple. Yebo, njengoba kubikiwe kwinhlolokhono eyenziwe phakathi Amathrendi weDijithali.
Ukucaciswa okuyinhloko kwe-Escobar Fold 1
Uma sigxila ngqo kwizincazelo zale foldable entsha siyabona ukuthi inohlelo olusebenzayo lwe-Android 9.0 oluneprosesa leQualcomm Snapdragon Octa Core 2.8GHz elivela ochungechungeni lwama-8150, okuyi-855, libuye lengeze izinhlobo ezimbili ezitholakalayo kuze kufike I-RAM nesitoreji, sinemodeli nge I-6 GB ye-RAM ne-128 GB yesitoreji, nenye ene-8 GB ye-RAM ne-512 GB yesitoreji sangaphakathi.
Uma sibheka amakhamera walokhu kusonga siyabona ukuthi kuhamba amakhamera amabili we-16 MP, Ine-microSD slot, ingeza ibhethri elingu-4.000 mAh futhi inenzwa yeminwe yokuvula. Ibuye ibe nechweba le-USB-C, i-Bluetooth 5.0 ne-double-band WiFi. Ukucaciswa akuyona into enamandla kakhulu futhi asibhekene nedivayisi endala, kepha ngokunengqondo akuyona i-smartphone efana nezinye futhi lokhu kuyabonakala ezicini ezahlukahlukene ze-terminal.
Uma sengikushilo konke lokhu futhi sengichaze kaningi noma kancane imininingwane ye-Escobar Fold 1 entsha, okuwukuphela kwento esele izobonakala ukutholakala nentengo yokugoqwa. Ku- iwebhusayithi ye escobar.inc Sithola lonke ulwazi maqondana nalokhu kusonga futhi njengoba kukhombisa ukuthi bakhuthaza ukuthi kunguhlobo olulinganiselwe olunamafoni ayi-100.000 atholakalayo ngentengo: $ 349 yenguqulo yememori engu-128GB kanye ne- $ 499 yenguqulo engu-512GB. Akungabazeki ukuthi yidivayisi entsha futhi ngaphezu kwakho konke kwehluke kakhulu kulokhu esesikubonile kuze kube manje, yize kuliqiniso ukuthi intengo ephansi yenza umuntu angabaze ikhwalithi yezinto ezisetshenziselwe ukwenziwa.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » U-Escobar Fold 1, ukugoqwa komfowabo womthengisi wezidakamizwa uPablo Escobar
Ungakucela kanjani ukubuyiselwa kwemali kohlelo noma umdlalo ku-Google Play Isitolo naku-App Store